आज सुनको मूल्य घट्यो, तोलाको कति कारोबार भयो ? हेर्नु`होस्
April 12, 2021 452
सुनको भाउ आज तीन सय रुपै`याँले घटेको छ ।आज सुनको भाउ तोलामा ८९ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकि`एको छ । यस`अघि गएको शुक्रवार सुनको भाउ तोलामा ८९ हजार ९ सय रुपैयाँ थियो ।
हिजो काठमाण्डौमा सार्व`जनिक बिदा र अस्ति शनि`वार भएकाले दुई दिन सुनको भाउ तोकिएको थिएन । यस्तै, आज चाँ`दीको भाउ पनि तोलामा ५ रुपैयाँले घटेको छ ।चाँदी आज तोलामा १२ सय ७५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
अर्को समाचार.. नयाँ बसपार्कका टिकट काउण्टर बन्द हुँदै
नेपालको राष्ट्रिय बसपा`र्कका रुपमा रहेको गोँग`बुस्थित नयाँ बसपार्कका टिकट काउण्टर आगामी बुध`बारदेखि बन्द हुने भएका छन् । बसपार्कका टिकट काउण्टरलाई अन्तर्रा`ष्ट्रियस्तरको टिकट काउण्टरमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भए`काले हाल सञ्चालन हुँदै आएका काउण्टर वैशाख १ गते देखि केही सम`यका लागि बन्द हुने भएका हुन्।
नयाँ बसपार्क सञ्चा`लन गरेको ल्होत्से बहुउ`द्देश्यीय प्रालिका महाप्रबन्धक सुनिल कुँवरले बसपा`र्कका काउण्टरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबाट सञ्चालन गर्नका लागि टिकट काउण्टर केही दि`नका लागि बन्द गर्न लागेको जानकारी दिए । नयाँ बस`पार्कभित्र हाल ३५ टिकट काउण्ट`र सञ्चालनमा छन् ।
प्रालिले टिकट काउण्टर मर्मत गर्न लागि`एकाले केही समयका लागि आफ्नो व्यवस्था`पनमा टिकट बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउन यातायात कम्पनीलाई आग्र`हसमेत गरेको छ। उक्त बसपार्कबाट हाल देशभरका ६५ भन्दा बढी जिल्लामा यात्रु सार्वजनिक या`तायात मार्फत आव`तजावत गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपा`लिकाको स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गा विसं २०५६ मा महानग`रपालिकाका तत्कालिन प्रमुख केशव स्थापित र प्रालि`का अध्यक्ष गेहेन्द्रबहादुर कार्कीबीच ‘सार्वजनिक–निजी सा`झेदारी’अन्तर्गत सम्झौता गरेर नयाँ बसपार्क सञ्चा`लनमा ल्याइएको थियो।
प्रालिका अध्यक्ष इञ्जि`नीयर दीपक कुँवरले नयाँ बसपा`र्कलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बसपार्कको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको बताए। ‘नेपालको एक`मात्र राष्ट्रिय बसपार्कलाई सुविधा`सम्पन्न बसपार्कको रुपमा निर्माण गर्न लागिरहेका छौँ’, उनले भने।
प्रालिले यात्रुको सहजता`का लागि कम्प्युटर प्रणालीको माध्यम`बाट टिकट काट्ने व्यवस्था मिलाएको छ। प्रालिले सरकारले लिएको नीतिअनुसार कोभिड–१९ सङ्क्र`मणपछि हुने भीडभा`डलाई ध्यानमा राखेर प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिएको हो।
ल्होत्सेले बस टिकट ख`रीद तथा बुकिङका लागि क्युआर कोर्डमार्फत भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाएको छ। लक्ष्मी बैंक लिमि`टेडको सहकार्यमा उक्त सेवा सञ्चालन गरिएको हो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको नयाँ बसपार्क १६१ रोपनी क्षेत्रफलमा सञ्चालित छ। उक्त बसपार्कमा एक हजार ५०० सार्वजनिक सवारी साधन पार्किङ गर्नसक्ने क्ष`मता छ।
Prevनेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलका भाई गोविन्द राज पौडेलको नि`धन
Nextचर्चित पत्रकार रबि लामिछानेले बनाएको रास्कोट अस्पताल आज देखि सञ्चालनमा (तस्बिर सहित)
नवराज विकको घरमा पुगे रवि लामिछाने , हेर्नुहोस् उनले सार्वजनिक गरेका ५ तस्बिर
बढ्यो संक्रमितको संख्या, आज कुन जिल्लामा कति संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस्…
माग्ने बुढाले बिहेमा जान कोट नपाएपछि… (हेर्नुस यो कमेडी भिडियो)